Zvose pamusoro peEexemane
1. Chii chinonzi Exemestane? Chinoshanda sei? 2. Exempestane inoshanda sei?
5. Exemestane migumisiro 6. Exemestane hafu yeupenyu
7. Exemestane side effects 8. Exemestane inobatsira
9. Exemestane reviews 10. Exemestane inotengeswa
11. Exemestane kunobata kenza yemvere muvakadzi
1.Chii chinonzi Exemestane? Chinoshanda sei?
Exemestane (107868-30-4) inodhaka yemishonga iyo inoshandiswa mukurapa mamwe marudzi echepamu rehadzi sekenza-hormone-receptor-positive yepamu. Mushonga uyu unowanzoshandiswa mukurapa kenza mumadzimai mushure mokunge apera. Exemestane (107868-30-4)inotambawo basa rinokosha pakudzivirira kudzoka kwekenza mune varwere. Kazhinji, mamwe mazamu emukamu kukura anokurudzirwa nehomro estrogen. Iyi mishonga yakabatsira mamiriyoni evarwere vanotambura nemhando dzakasiyana dzekenza, uye chiremba achapa mishonga mushure mokuongorora mamiriro ako. Ichi chinodhaka chinoshanda nekuderedza mazinga ehomro estrogen mumuviri wako, iyo inobatsira mukuderedza uye kuchinja mitezo yekenza yehadzi.
Zvisinei, pasinei nemishonga iyi iri kuwanikwa kukuru kunofanira kukubatsira kuti uchengetedze kenza yemazamu, vakadzi munguva yavo yekurera vanodzwa kusashandisa. Iyo mishonga inogona kushandiswa pamwe chete nemimwe mishonga yakadai seGoserelin (Zoladex) kana chimwe chipi zvichienderana nemamiriro ako. Kushandisa chirwere pasina chiremba chiremba kunogona kutungamirira kumigumisiro yakakomba, uye naizvozvo, zvinokurudzirwa kuenda nguva dzose kuenda kuchiremba wekurapa usati watanga kushandisa. Mushonga uyu unowanikwa mune zvakasiyana-siyana zvakadai se Aromasin asi zvinyorwa, uye muyero unoramba uri wakafanana. Iwe mishonga inofanira kukutungamirira iwe wese muitiro kubva pakutenga kushandiswa.
Iwe unogona kutenga mishonga inodhaka paIndaneti kana kubva kumutengesi anoyemekedzwa akapoteredza iwe. Zvisinei, iwe unofanirwa kuchenjerera kana uchitenga chero mishonga sezvo iwe unogona nyore nyore kuwana michina yemhando isingagoni kurwira mitsva yaunoda. Tichakurukura kuti sei uye kupi kwatingazotenga yakanakisisa uye yakanakisisa Exemestane gare gare munyaya ino.
2.Exempestane inoshanda sei?
Sezvambotaurwa pamusoro apa, ichi chinodhaka chinoshanda nekuderedza kana kuderedza kushandiswa kweestrogen hormone mumuviri wako. Iyi hormone ndiyo inobatsira kukura kwekenza yemazamu, uye kana pasina zvishoma kugadzirwa, zvinoreva kuti iwe uchave uchidzora kukura kwechirwere. Zvisinei, ichi chirwere chinoshanda chete mukurapwa kweestrogen receptor positive (ER +) rudzi rwekenza dzekamu. Izvozvo zvinoreva, kana kenza yako yepafu inonzi hormone receptor yakaipa, Exemestane haizokubatsiri kudzora chirwere chacho. Saka, kwete kenza yese inogona kurapwa uchishandisa ichi chirwere.
Estrogen ndiyo hormone yepabonde inoita basa rinokosha pakuita zvepabonde, uye ndicho chikonzero vakadzi vasati vasvika pakuguma kwavo vanoodzwa mwoyo nekushandisa chirwere ichi. Kana iwe uri wechikwata ichi, ipapo chiremba wako achafanirwa kuratidza mumwe mushonga wekenza yako yepabonde kunze kwekuti iwe usati waronga kubereka vana zvakare. Low estrogen inoreva kuti haukwanise kubereka semukadzi uye naizvozvo, zvakakosha kuti uongororwe kuchipatara usati watanga kushandisa chirwere ichi. Iyi mishonga ndeyomunhu anromatase inhibitors boka remishonga
Uyu mishonga yemuromo inoshandiswa mukurapwa kwemhando dzakasiyana dzekenza yemazamu. Kunze kweizvi, Exemestane (107868-30-4) inoshandiswawo mukudzivirira kwekenza yebonde kubva kudzoka shure kwemishonga. I Exemestane inoshandiswa nevarwere vemazamu vemazamu avo vakagadzirirwa nemishonga inozivikanwa se tamoxifen kwemazana e2-3 uye pasina humwe huri nani huri nani. Ichi chemishonga inowanzopiwa kuvarwere vepabonde mushure mushure mekuvhiyiwa kuti kuderedze mikana yehutachiwana hunobudirira zvakare mumuviri wako. Kana uchinge wawana radiotherapy kana chemotherapy, mushonga wako uchakupa zano panguva yakanakisisa yekutanga kutora Exemestane.
Kune rumwe rutivi, Exemestane inoshandiswa seyokutanga kurapwa kwemhando dzekenza dzemazamu. Pakutanga kwekutanga kwekenza yemvere, chiremba achakukurudzira kuti ushandise ichi chirwere kana chirwere chisina kukura, uye kana pasina chikonzero chekuvhiyiwa. Dzimwe nguva mishonga inopiwawo kune varwere kuti vashandise kenza huru yepabonde vasati vasvika pakuvhiya kurapwa. Mishonga yako ichava munhu akakurudzira kukupa zano panguva yakanakisisa yekutora ichi chemishonga mushure mekuongorora kenza yako yepabonde.
Mishonga iyi inorayirwawo kuti ibatsire vakadzi vanotambura nekenza yemazamu, izvo zvave zvichinyanya kuipa mukuguma kwavo panguva iyo vari kutora tamoxifen. Iyo mishonga inoderedza mazinga eestrogen hormone, iyo inobatsira pakurisa tumvere dzemazamu dzinoda kuti hormone inokura. Vakadzi, mumapoka avo ekutanga echechi yepafu pavanonoka kuenda kumwedzi, vanogonawo kushandisa chirwere ichi kuti vabatsire kudzora chirwere chacho. Dzimwe nguva mishonga inogona kushandiswa kurapa kenza yemazamu muvakadzi vanenge vasati vava kusvika kumwedzi, asi nguva dzose taurai nachiremba wenyu musati matanga kutora Exemestane.
Iyi iyi mishonga yemuromo uye iwe unofanira kutora bhandi imwe ye25mg kamwe pazuva pazuva rekudya. Nhamba yacho inogara iripo kune vose vanorwara nekenza yepamusoro uye yekutanga. Inokurudzirwawo kutora mushonga panguva imwe chete zuva rimwe nerimwe kuti zvive nani. Iva nechokwadi chekuti iwe unotevera mirairo yose yechiremba panguva yose yechipimo. Usatora zvishoma kana kupfuura kupfuura izvo zvinorayirwa nemishonga yako. Kana iwe uine mibvunzo kana zvinetso zvinokurukura nachiremba wako usati watanga kutora muyero. Chiremba wako angakurudzira kuti iwe utore Exemestane kwemakore anoverengeka kana kutowedzera nguva.
The Exemestane dosage inofanira kutorwa kwechinguva chinotaurwa nechiremba wako kubvira panguva iyo inotarirwa nekenza yako yepabonde. Kazhinji, mishonga inofanira kutorwa kwemakore anenge mashanu kusvika gumi. Dzimwe nguva, vamwe varwere vanotanga kutora Exemestane dosage mushure mokutora tamoxifen kwemakore mashomanana. Zvisinei, kana chiremba wako akakurudzira kuti utore chirwere ichi kuti urope kenza yepahumbu yakadzoka kana kupararira kune dzimwe nhengo dzomuviri wako, iwe uchatora chirongwa che Exemestane chero bedzi ichichengetedza zvirwere zviri pasi pesimba.
Kunyange kana iwe ukava zvakanaka, usarega kuedza kutora mizinga yako pasina ruzivo rwechiremba wako. Iwe unganzwa uporeswa, asi kenza inenge ichangopera uye kana isina kurapwa zvakanaka inogona kudzoka mushure mechinguva. Kana iwe uchinge warasikirwa newaiti nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe, zuva rinotevera usatora piritsi imwe yakawanda kuti ubhadharire, ingotora tafura imwe sezvainokurudzirwa nachiremba wako kubva panguva ye Exemestane mumuviri wako zvichakwanisa kukuendesa kune zuva rinotevera. Kuti ugare wakachengeteka, usambowedzerwa muyero kunze kwekuti chiremba wako akurudzire naizvozvo icho chiri chiitiko chisingawanzoitiki.
Ichi chiremba chakave chakaedzwa kwemakore akawanda, uye chave chichiratidza kupa zvigumisiro zvakanaka pachinoshandiswa zvakanaka. Kwemakore mazhinji ikozvino, Exemestane yakakosha mukurapa kwemarudzi ehutano wepabonde kuvakadzi vakawanda zvikuru avo avo vakawana kuguma kwavo. Kune rumwe rutivi, mishonga iyi yakaratidzawo kuti yakasimba mukudzivirira kenza yemazamu kudzoka shure kwemishonga. Chigumisiro chakajeka chaunofara nacho mushure mekushandisa chirwere ichi chiri kuderedza maitiro eestrogen, ayo ndiwo anoita kuti kuwedzera kwekenza yemazamu mumuviri wako. Exemestine, kana yakashandiswa zvakakodzera, inopa zvibereko zvakanaka kuvashandisi.
Zvisinei, kana kuwedzerwa kana kushandiswa pasina mazano akakodzera kubva kumarikari kunogona kutungamirira kumigumisiro yakakomba yakadai semusoro uye kunyange kuora. Nokudaro, nguva dzose inokosha kuti uende kuchipatara chekare, iwe uchienderera mberi neyero uye pashure. Vanorwara nekenza vanorayirwa kuti vaende kuongororo dzenguva dzose dzezvechiremba kuti vaone kufambira mberi kwemishonga pamwe nehutano hwehutano. Panewo mimwe mishonga inogona kushandiswa pamwe chete neCempemestane nemigumisiro yakanaka, asi chiremba wako achakupa mazano maererano. Mukuwedzera, iva nechokwadi chokuti iwe unoudza chiremba wako pamusoro pemishonga ipi zvayo uye kana iwe uchinge uchinge waona zvinotangira mberi paunotora chirongwa che Exemestane.
6.Exemestane hafu yeupenyu
Exemestane hafu yeupenyu ine 24hrs, uye ndicho chikonzero iwe unongotarisirwa kutora bhwende rimwe re 25mg kamwe pazuva. Chirwere ichi chicharamba chichishanda mumuviri wako uye zvichengetedze maitiro ekushongedzwa ehomrogen zvakaderera. Kunyange kana iwe ukakanganwa kutora dhora rako, usatora rimwe diti zuva rinotevera. Chirwere ichi chiripo mumuviri wako chichave chakakwana kukutora iwe zuva rakatevera. Upenyu hwakazara huri 48hrs saka usazvinyanyisa, zvinogona kutungamirira kumagumisiro akaipa. Usambofa, tora zvinodarika kana zvishoma kudarika zvakakurudzirwa nachiremba wako, uye kunyange apo chiremba wako anoratidza kuti iwe unorega kutora mishonga, inenge ichiri kushanda mumuviri wako.
Kungofanana nedzimwe mishonga, Exemestane ine zvishoma zvayo zvinowanikwa kune vanhu vanokundikana kutevera mirairo yeiyo. Kana iwe ukatora mushonga uyu usina kuenda kuchipatara kuongororwa, iwe unowanzova nemigumisiro yakakomba. Kunyanya kuderedza uye kuora kwezvirwere ndizvo zvinokonzerwa neEexemane madhara. Semuenzaniso, mushonga uyu unogona kukundikana kukushandira iwe nekuda kwemuviri wako kana masimba. Uyu ndiwo mishonga yemishonga, uye kuutora pasina ruzivo rwechiremba wako zvingaita kuti uwedzere kubudirira.
Pane zvimwe zvikamu zvinowanzoitika zvinowanzoitika kune vose vanoshandisa Exemestane, asi vanoenda shure mushure memwedzi miviri yekutanga yeiyo. Zvisinei, kana migumisiro yechirwere ichiwedzera kana kuti yakaoma kwazvo kutakura, zidzai boka renyu rezvechipatara kuti muwane nzira yakanakisisa yekudzikisa. Izvozvo zvinowanzoitika zvinosanganisira;
Zviratidzo zvekumuka kwemwedzi sezvo mushonga unoderedza maitiro eestrogen hormone mumuviri wako uye ndicho chikonzero zvakakosha kutora ichi chemishonga mushure mekuberekwa kwako. Iwe unogona kusakwanisa kubereka vana mushure mekutanga kutora ichi chirwere.
Iwe unogona kunzwa kurwadziwa pamapfundo ako nemisungo kwemazana ekutanga emwedzi, asi zvinonyangarika nenguva.
Iwe unogona kuora mwoyo nekuderedza mwoyo.
Kusuruvara ndeimwe dambudziko rinowanzoshandiswa nevashandisi veEexemestane pamwe chete nokuneta, kunyange kana iwe usati washanda.
Kugadzikana kwemapfupa ako kana osteoporosis kune imwewo migumisiro yechirwere iyo vamwe vashandisi veEexemestane vanoona.
Panewo mamwe madambudziko makuru apo kana iwe ukavawana, unofanira kuzivisa chiremba wako pakarepo kusati kwaitika. Zvisinei, izvi zvinowanzoguma nemigumisiro yakawanda inosangana nevamwe vevashandisi veEexemestane. Dzinosanganisira ganda uye vhudzi zvinoshanduka, kuwedzera muhushutoriki mumuviri wako, chido chekudya, uye chiropa chinoshanduka, pakati pevamwe. Exemestane migumisiro dzimwe nguva inotarisa kuti muviri wako unopindirana sei nemishonga. Miviri yevanhu yakaoma, uye dzimwe nguva mushonga unogona kushanda zvakanaka kwauri, asi kana shamwari yako ichiedza, inoguma nemigumisiro yakakomba. Zvakaoma kutaurira zviremera izvo zvinokonzerwa nemigumisiro yaunofanira kutarisira kana uchishandisa ichi chirwere.
Mashoko akanaka ndeokuti mazhinji eEexemane madhara anogona kugadzirirwa kana iwe uchiudza chiremba wako munguva. Zvisinei, ihwowo basa rako rinoita kuti uve nechokwadi chokuti iwe unotevera mazano ese anopiwa newaiti wezvinodhaka uye chiremba wako zvakare. Uyewo, chengetedza kuti unoenda kuongororongwa wezvechiremba nguva dzose nemigumisiro yakanaka. Ratidza chiremba wako pamusoro pemishonga ipi zvayo yaunogona kuva nayo usati watanga kutora muyero. Simudza zvinetso zvose nachiremba wako kuti urege kunetseka.
Exemestane zvinobatsira inonyanya kuzivikanwa nekudzora mamwe marudzi echepamu rehadzi muvakadzi. Iyo inoderedza mazinga eestrogen mumuviri anodikanwa nekenza yekenza yemvere kuti ikure. Kune rumwe rutivi, mushonga uyu uchakubatsira iwe kudzivisa chero hupi huri kubudirira kwekenza yepamuviri mushure mokunge uchitarirwa nenzira inobatsira yekuvhiya. Kunyangwe ichi ichi chizivo chinozivikanwa zvikuru chekushandisa Exemestane, kune zvimwewo zvikomborero zvaunofarira mukutora ichi chemishonga.
Semuenzaniso, iyi inodhaka yemishonga, uye izvi zvinoreva kuti hausi kuzosangana nemayipi inenge uchitora deta yako. Iyo mishonga ine hupenyu hunoshamisa hunoshingaira hwemaawa e48, uye kana iwe uchinge uchinge uchitadza dhigi usina chaunofunganya nezvazvo, iwe unongoda kutora danho rinotevera zuva rakatevera, uye iwe wakanaka kuenda. Zvidzidzo zvakaratidza zvakare kuti Exemestane inogona kubatsira mukudzivirira miviri yemaviri kubva kuhutano uye kuora kwekuvhiringidza kune varume nevakadzi. Kunze kwekuti, zvinodhaka zvinonzi zvinobudirira mukudzivirira masero emuviri wako kubva pakuvhiringidza kuDNA yavo nehuipi hwehuvha panguva yehutayidi. Exemestane inoshanda sekanakisisa anti-inflammatory agent.
Kutarisa pane zvakasiyana-siyana Exemestane reviews, iwe uchacherechedza kuti ichi chinodhaka chave chichitsvaga zviitiko zvakasiyana siyana zvevashandi kubva kune mumwe munhu kune mumwe. Zvisinei, mishonga ine unhu hunoshamisa uye nhamba yakanaka yeongororo dzakanaka, zvinoreva kuti yakave yakabatsira zvikuru kuvashandi vakawanda. Chirwere ichi chave chakakosha munyika yezvokurapa kunyanya mukurapa nekudzivirira kwemamwe marudzi evanhu vane kenza yepamu muvakadzi. Vazhinji vashandisi vakarumbidza chirwere ichi kuti vave nesimba mukuderedza michero yeestrogen hormones mumuviri, iyo inokonzera kukura nekupararira kwekenza yemazamu.
Kune vashandisi vanorida nokuti ndeyomuromo yemishonga inodhaka iyo inopa zvibereko zvakanaka kana yakashandiswa zvakanaka. Vazhinji vevashandisi veEexemestane vanogutsikana nemishonga iyo mishonga yakavabatsira kugadzirisa kenza yemazamu. Vamwe vanosimbisa kuti mishonga iyi yakaita chikamu chakakosha mumurapa wavo wepabonde kuporesa nekudzivirira chirwere chisingazodzoka. Chiremba uye zvakasiyana-siyana zvidzidzo zvezesayenzi zvinoratidzawo simba remukati wekenza yemishonga. Mukupfupisa, chikamu chikuru chevaya vane chirwere chepachifu vakapa Exemestane mhinduro dzakanaka uye dzakanaka kwazvo.
Nenzira yakafanana, vamwe vashandisi havana kumbova neruzivo rwakanaka nechirwere ichi uye vari kutaurawo nezvekuvhiringidza kwavo. Zvinowanzoitirwa michina yakawanda zvikuru zvokuti madhiragi anokundikana kushanda kune vamwe vashandisi. Zvisinei, ruzhinji rwevashandisi veEexemestane avo vakave nemigumisiro yakakomba vanoratidza kuti kukanganisa kwavo kunosanganisira mishonga mumutambo wose. Chirwere chekurapa chinokosha usati watanga kushandisa chero mishonga. Zvinokurudzirwawo kuti unosangana nachiremba wako pakarepo iwe unotanga kuona chero zvikanganiso zvakanyanya paunotora ichi chirwere. Inenge yose ye Exemestane side effect inogona kudzorwa kana iwe uchiudza chiremba wako munguva yakanaka.
Kazhinji, Exemestane imishonga inonyanya kuve yakakosha mukurapa kenza yepamuviri muvakadzi. Nzira yakanakisisa yekuwana mishonga yemishonga yakawanda ndeyokubatisisa kudikanwa kwekurudzirwa uye nguva dzose inosanganisira boka rako rezvehutano kana iwe ukaona chero zvakakosha. Usarega kungotora mushonga wacho pasina zano rechiremba wako sezvo iwe ungakundikana kudzora kenza yemazamu, iyo inouraya chirwere. Dzimwe nguva mishonga inogona kukundikana kukushandira iwe, asi chiremba wako achakupa imwe mishonga inoshandiswa iyo inofanirwa nemutumbi wako.
Exemestane inotengeswa inotengeswa pasi pemazita emhando dzakasiyana mumatare akasiyana-siyana kana nzvimbo, uye zita rinowanzozivikanwa pamudhaka uyu ndiAromasin. Iwe unogona kutenga Exemestane yakawanda paIndaneti kana kubva kune chero mishonga yepamutemo yakakupoteredza, asi iva nechokwadi kuti usatanga kuitora kunze kwezano rechiremba wako. Iva nechokwadi chokuti iwe shandisa Exemestane powder kubva mutengesi anoyemekedzwa kana mugadziri wemigumisiro yakanaka. Kwete yose Exemestane supplier iwe unowana paIndaneti inogona kuvimbwa. Vamwe vangave vane hutsika hwepamusoro kana kuti zvinodhaka zvinowanzova nengozi kuhutano hwako. Tarisa kuongororwa kwevatengi kukutungamirira pakuita chisarudzo chakanaka.
Chiremba wako achakutungamirira pane nzira yekuwana yakanakisisa uye yakanakisisa Exemestane kubva kune mutengesi akatendeka uye akavimbwa. Isu tiri yakanakisisa Exemestane mugadziri uye mutengesi munharaunda yacho, uye tinoshandisa panguva yakanunurwa. Enda kunzvimbo yedu yepaiti kuti uite urongwa hwezuva ranhasi uye iva nechokwadi chokuti uwane Exemestane yakanakisisa iyo ichakubatsira kurwisa kenza yemazamu. Nzvimbo yedu yepaIndaneti inoshandiswa-ishamwari. Nokudaro, unogona kuita kuti urongwa hwako huve hwakanaka kubva kunyaradzo yeimba yako. Kana iwe uine mibvunzo kana zvinetso, iwe unogona kugara uchititumira isu kuburikidza ne email yedu uye mahofisi pawebsite yedu.
Kune rumwe rutivi, iva nechokwadi chokuti unonzwisisa kuti mitemo iri munyika yako inotaura nezvekushandiswa, nhaka, uye kutenga Exemestane. Isu tiri mutemo unoramba uri mutemo, uye hatidi kuisa vatengi vedu mumatambudziko nemitemo yavo yekumusha kwekutengesa kana kutenga zvigadzirwa zvepamusoro. Semuenzaniso, muUnited States of America neCanada, Exemestane inoramba iri mushonga-mushonga chete. Izvozvo zvinoreva kuti haugone kutenga mishonga kunze kwekuti iwe une chiremba chiremba. Zvisinei, hazvisi pamutemo kuti uwane, kutenga, kana kushandisa mushonga, asi Exemestane haisi yepamusoro pemishonga inodhaka mumatambudziko maviri aya.
11.Exemestane kunobata kenza yemvere muvakadzi
Exemestane ndiyo mishonga yakanakisisa yakaratidza pamusoro pemakore kuti inokosha munyika yezvehutano mukurapa kenza yepamuviri muvakadzi. Mishonga inoshanda kuburikidza nekuderedza kushandiswa uye maitiro eestrogen hormone mumuviri wako izvo zvinokonzera kukura pamwe nekupararira kwekenza yepamu mumuviri wako. Mishonga iyi inowanzoshandiswa nevadzimai vakawana kusvitsa kwavo nokuti kunogona kukanganisa madzimai avo vachiri mumakore ekubereka kwavo. Exempestane zvakare yakakosha pakudzivirira vashandi kubva mukudzoka kana kupararira kwekenza yepamuviri mushure mokunge mava kubudirira kurapwa. Zvichienderana nekenza yako yepabonde, chiremba wako anogona kukukurudzira kuti utore mushonga iwoyo semishonga kana kenza yako iri pamavambo ake. Mishonga yako inogonawo kuisa Exemestane kuti ishandise kwekanguva isati yasvika pakuvhiya.
Zvinokurudzirwa kuti utore rimwe bhandi re 25mgs pazuva, iyo inowedzera miyero yepamusoro yepamusoro uye kune varwere vanorapa kenza yemazamu mukutanga kwayo. Mushonga wacho unogona kushandiswa pamwe chete nemimwe mishonga inokosha iyo chiremba wako achaona akakodzera iwe. Yeuka kuti usambokwanisa kuwedzera kana kuderedza chirongwa chakatarwa usingabvunzi nemishonga yako. Kana iwe uchinge uine huipi huri nemigumisiro paunenge uchitora chiremba iwe chiremba wako kuti abatsirwe. Dzimwe mimwe migumisiro yakadai seyomusoro, chirwere, uye kurutsira inogona kunge yakasununguka mumwedzi yako yekutanga yeiyo, asi kana ikagara kwenguva yakareba kupfuura yakashambadza udza physic yako. Munenge maiti zvose Exemestane migumisiro inogona kudzorwa kana iwe ukatora matanho akakodzera uchitevera mirairo yeiyo.
The Ultimate Guide kwa Dihydroboldenone / DHB yeMuviri wekuvaka(Inotanga mune itsva browser tab)